ब्याकलिंक सिर्जना साइटहरूले तपाईंको वेबसाइटमा मूल्य ल्याउन सक्छ?
आजकल, खोज ईन्जिनियरिङ् एल्गोरिदमहरू अधिक जटिल र स्मार्ट हो. Google ले यस्तो नयाँ मानक प्रदान गर्दछ जुन "DA" (डोमेन प्राधिकरण) र "PA" (पृष्ठ प्राधिकरण) को रूपमा मानिएको थियो कि पृष्ठपैंक बदल्नको लागि. यी नयाँ पङ्क्तिहरू वेबसाइट प्राधिकरणको स्तर निर्धारण गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ.
गुणस्तर र शक्तिशाली लिङ्क निर्माण प्रोफाईल सिर्जना गर्न हरेक वेबसाइट मालिक र ब्लगरको सपना हो - yacht charter in miami. उच्च प्राधिकरण ब्याकलिङ्कहरूले तपाईको साइटमा धेरै मूल्य ल्याउन सक्छन्. सबैभन्दा पहिले, उनी SERP मा तपाईंको वेबसाइट रेटमा सुधार गर्न सक्छन्. दोस्रो, तिनीहरूले लक्षित र आफ्नो साइटमा ट्राफिक परिवर्तन गर्छन् र तेस्रो रूपमा उनीहरूले तपाइँको व्यवसाय राजस्व बढाए.
उच्च डीए साइटहरु बाट ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न यो सजिलो कार्य छैन।. एक विजेता लिङ्क निर्माण अभियान सिर्जना गर्न तपाइँलाई विशेष ज्ञान र दक्षहरू हुनुपर्दछ. तथापि, यदि तपाईं यस क्षेत्रमा अनुभवको कमी महसुस गर्नुभए पनि तपाईलाई त्याग्नु हुँदैन. यस लेखमा, तपाइँ उच्च डीए वेबसाइटहरूको एक सूची फेला पार्नुहुनेछ जसले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूबाट साइनअपहरू स्वीकार गर्दछ र तिनीहरूलाई नयाँ प्रोफाइल सिर्जना गर्ने मौका दिन्छ।. यसबाहेक, म तपाईंलाई साथमा केही सुझावहरू साझेदारी गर्नेछु कसरी अनुकूल ब्याकलिङ्क प्रोफाइल सिर्जना गर्ने.
ब्याकलिंक निर्माण साइटहरू
यदि तपाईं एक उत्पादन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई यसको गुणस्तरसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, विचार एक प्रशंसापत्र पठाउँदै. जब तपाईं एक प्रशंसापत्र सिर्जना गर्नुहुन्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि एक उत्पाद प्रदायकले यसको होमपेज वा प्रशंसापत्र पृष्ठमा राख्न सक्छ. एक नियमको रूपमा, प्रदायकले तपाईंको लिंकलाई प्रशंसकसँग नजिक राख्ने भनेर देखाउँछन् कि तपाई एक वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्छ. त्यसैले, तपाईं प्रशंसापत्रबाट गुणस्तर र एक कार्बनिक ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
ब्लगर प्रयोगकर्ताहरु को माध्यम ले लिंक को अवसरों को खोज्नुहोस
यदि तपाइँ एक सफ्टवेयर उत्पादन, गुणवत्ता को जानकारी या अन्य मूल्यवान उत्पादनहरु संग प्रयोगकर्ताहरु लाई प्रदान गर्छन, तपाईं केवल यसलाई सान्दर्भिक र उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्कमा बदल्नुहोस्. तपाइँ तिनीहरूलाई ब्लगर गर्नेहरूलाई प्रस्ताव गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा ग्राहकहरूलाई प्रतिक्रिया छोड्न सोध्नुहोस्.
यस निर्देशनलाई पछ्याउनुहोस् ब्लगर समीक्षाहरू मार्फत तपाईंको साइटमा गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नका लागि:
तपाईंको ब्लगमा फेला पार्नुहोस् जुन पहिले नै आफ्नो उद्योगसँग सम्बन्धित केहि पोस्ट गरिएको छ।. तपाईंको लक्षित कीवर्डको साथ प्रश्न Google खोजी बाकसमा घुसाउनुहोस्. फलस्वरूप, एक खोज इञ्जिनले तपाईंलाई वेबसाइट र ब्लगहरूको सूची दिन्छ जुन तपाइँको उद्योगलाई संकेत गर्दछ.
कुनै प्रमुख प्राधिकरण साइटहरु र नयाँ साइटहरु लाई फिल्टर गर्नुहोस. अन्ततः, तपाईं एक ठोस सूची ब्लगरहरू संग तपाईंको छोडिनेछ जुन तपाईको प्रस्तावमा रुचि हुन सक्छ.
वेबसाइट मालिकों र ब्लगर्स लाई ईमेल या फोन कल को माध्यम ले पुग्नुहोस. तिनीहरूलाई दयालु र विनम्र हुनुहोस् र तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने भाषाको बारेमा धेरै सावधान रहनुहोस्. यो हुन सक्छ कि तपाइँ भुक्तानी वा अन्य कुनै पारस्परिक लाभकारी सर्तहरूको बारेमा सोध्नेछ.
लिंक पुन: वितरण
लिङ्क पुनर्वितरण एक सरल तरीका हो जुन शक्तिशाली लिंक जुन तपाईको साइट. तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको बारेमा उल्लेख खोज्नु पर्दछ जहाँ तपाईंको साइट लिंक संकेत गरिएको छैन. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुरा यो लेखकको लेखकसँग सम्पर्क गर्न र उसलाई वा लिङ्क थप्न सोध्नु हो. यस्तो ब्याकलिंकहरूले तपाईंको ब्रान्डमा मतदानको रूपमा सेवा गर्दछ र Google को आँखामा तपाईंको वेबसाइटको प्राधिकरण बढाउनेछ.